आइपीएलः पहिलो खेलमा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः पहिलो खेलमा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, चैत ९ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) १२औं संस्करणको पहिलो खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स ब्यंग्लोर विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्सले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । खेल नेपाली समयअनुसार राति ८ः१५ बजेदेखि चेन्नईमा शुरु हुँदै छ । ब्यंग्लोरको नेतृत्व विराट कोहलीले र चेन्नईको कप्तानी महेन्द्रसिंह धोनीले गरेका छन् । पहिलो खेलमा को–कोले पाए मौका? हेर्नुस्–
आईपीएलमा इतिहासमै सबैभन्दा सफल टिम चेन्नई हो । उसले अहिलेसम्म ३ पटक उपाधि जितेको छ भने ४ पटक उपविजेता बनेको छ । विराटले नेतृत्व गरेको बेंगलोर भने आईपीएलको अभागी टोलीको रुपमा गनिन्छ । किनभने स्टार खेलाडीले भरिएर पनि उसले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन ।
ट्याग्स: Cricket, IPL, RCB Vs CSK